Odeefano ijoo fi Lolli PP fi TPLF gidduutti adeemsifamaa jiru Uummata Oromoo ni ilaallataa? Marii – Kichuu
HomeOdeefano ijoo fi Lolli PP fi TPLF gidduutti adeemsifamaa jiru Uummata Oromoo ni ilaallataa? Marii
ODUU IJOO SAD-25/2020
Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan turan Dr.Huseen Kadiir guyyaa har’aa Mana Murtii Aanaa Laga Xaafoo Laga Daadhitti dhiyaachuun Manni Murtii mirga Wabiitiin akka gad lakkifamu ajaja dabarseera.
Garee Abukaatota dhimma hidhamtoota Siyaasaa Oromoo hordofaa jiran keessaa tokko kan ta’an Ogeessi seeraa Obbo Kadiir Bulloo akka ibsanitti, Dr.Huseen Kadiir guyyaa har’aa Mana Murtitti kan dhiyaatan yoo ta’u, Gaafii yeroo dabalataatiif hidhaa tursiisuudhaaf Poolisiin Oromiyaa dhiyeesse Manni Murtii kufaa taasisuun Wabii Qarshii 10,000’tiin akka hidhaa irraa bahu ajajeera.
Haa tahu malee murtii mana murtii kana kabajuudhaan hidhaa irraa ni hiikamuu fi hin hiikamanii Dr. Huseen hanga ammaatti beekuun hin danda’amne.
Ajjeechaa Artist Hacaaluu Hundeessaa booda hayyoota Oromoo danuu hidhaman keessaa nama tokko kan ta’an Dr. Huseen kadir, jalqaba magaalaa Finfinnee keessatti qabamanii mana hidhaa Godina Addaa Naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataatti hidhamanii turan.
Torban sadiif Sabbatatti hidhamanii turuun, boodarra Poolisii Oromiyaatiin gara godina Baalee Aanaa Agaarfaatti geeffamanii mana hidhaa Aanaatti hidhamanii turuun isaanii ni yaadatama.
Tibba darbe ammoo Mana hidhaa Aanaa Agaarfaatii baasuudhaan gara Finfinnee geessuu isaanii maatii waabechuun gabaasnee turre.
Asiin duras Dr.Huseen Kadiir dabalatee hidhamtoota siyaasaa kanneen birootiif mirga wabii Maallaqaatiin akka bahaniif Manneen Murtii ajaja dabarsaa turanis, Qondaalota tikaa, Poolisii Federaalaa fi Poolisii Oromiyaatiin Namoonni hedduun Mana hidhaa duraan turan irraa butamuun achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa turuu isaanii maatii hidhamtootaa odeeffachuun nutis gabaasaa turre.
Godina Wallaggaa lixaa Aanaa Sayyoo Nooleetti Humnoonni poolisii addaa Oromiyaa guyyaa kaleessa namoota nagayaa afur irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwachuu madden keenya gabaasan.
Torbanuma kana keessa ammoo namoonni 4 kanneen biroo walumaa galatti namoonni 8 humnoota murna Bilxiginnaatiin ajjeefamanii jiraachuu Jiraattonni OMN’ttti himaniiru.
Maqaan namoota gara jabummaa diinaatiin ajjeefaman keessaa kan nu dhaqqabe
1.Tamasgeen Xaasoo abbaa ijoollee 3,
2. Yoonaas waasuu abbaa daa’ima 1ti.
3. Nama shaakiruu jedhamu kan ammaaf maqaan abbaa isaa nun dhaqqabin.
5. Tamasgeen Ayyaanaa
6. kaffalee Beenjaa fi namootni lama ammaaf maqaan isaanii nun geenye faa dha.
Warroota maqaan armaan olitti eerame keessaa Tamasgeen xaasoo, yoonaas waasuu , shaakiruu fi Indaaluun guyyaa kaleessa ganda kolbaa Amboo bakka adda deembii jedhamutti homnoota poolisii Oromiyaatiin maqaa shanee jedhu itti maxxansuun kan ajjeesan tahuu jiraataan magaalaa Sayyoo Noolee tokko OMNitti himeera.
Akka yaada jiraataa kanatti namootni kunneen mana isaanitii qabamuun harka isaanii dugda duubatti deebisanii cabsuun erga daandii dheeraa fudhanii deemanii akka ajjeesaniidha kan eerame.
Kan ajjeese humna addaa Poolisii Oromiyaa yoo ta’u kan ajaje hogganaa waajjira nageenyaa kan ta’e nama Dagaagaa mahaammad jedhamu tahuun ifoomeera. Poolisoota keessaa kan itti dhukaasee ajjeese immoo nama saajin Girmaa jedhamu tahuus maddi keenya kun maqa dhayinaan ibseera.
Sirni awwalcha .Tamasgeen xaasoo fi yoonaas waasuu har’a jechun 16/3/2013 akka lakk. Habashaatti mana Amantaa Waldaa warra wangeela makaana yesuus Nya’aa Qarabbootti rawwatamee jiraachuus jiraataan Sayyoo Noolee kun OMNitti himeera.
Odeessa birootin ammoo boolla mooraa waajjiraa keessatti qotuun namoota siyaasan hidhamanii jiran achi keessatti fixuuf karoorfatanii akka jiran namni waajjira sivil sarvisii Aanaa Sayyoo Noolee keessaa hojjetu kun yaada isaaf laachuu maddi keenya kun addeesseera.
Odeeffannoon nu dhaqqabe kan mullisu boolli kun qotamee perseentii 95 irra gahe jirachuu fi kan qotaa jiranis namoota siyaasan achi keessatti hidhamanii jiran dirqisiisuun tahuu ifoome. Erga boolli kun qotamee xumuramee namoota siyaasan hidhamanii jiran hunda achi keessatti fixuuf akka kaabinee bilxiginnaatti karoorri kaa’amuun saaxilameera.
Kunis kan ifoome Iccitiin kun ni baha taanan waajjira kanaa wajjin walitti isin gubna jechuun bulchaa aanaarraa jalqabee jala ceetonni sirnichaa hojjetoota mootummaatti dhaadatan kan taran tahuu maddi keenya kun eereera.
Barsiisaa Sintaayyoo shinnooreef dargaggoon Dinquu Baqqalee jedhaman boolla keessatti hidhamuudhaan nyaatafi bishaan dhugaatii dhabuun du’aafi jireenya gidduu jiraachaa kan jiran tahuunis odeeffannoo birooti
Godina Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul jedhamuun beekamtu keessatti Milishaan gandaa ummata nagayaa irratti dhukaasa banuun dhagahame.
Namoota dhukaasni irratti baname keessaa Qeerroo maqaan isaa Mu’aaz Yuusuf jedhamu miidhaan jabaan irra gahuun yeroo ammaa Hospitaalatti gargaarsi yaalaa taasifamaaf jiraachuu maddi keenya garasii dubbifne OMN’tti himeera.
Dargaggoon Rasaasaan miidhame kun yeroo ammaa du’aa fi jireenya jidduu jira kan jedhu maddi keenya garasii dubbifne, halli nageenyaa Aanicha keessa jiru yaaddeessaa tahuu dubbate.
Qeerroon Aanichaa Caasaa Murna humnaan biyyattii bulchaa jiru kana gubbaa hamma jalatti buqqisuuf irratti hojjachaa jirra kan jedhan Qeerroon garasii dubbifne tarkaanfiin akkanaa Oromiyaa kutaa mara keessatti fudhatamuu qaba jechuun dhaaman.
Halkan edaa Waraanni baay’inaan araddaa kana keessa qubachuun nageenya Ummataa goolaa akka ture namni kun itti dabaluun ibseera.
Godina Shawaa Lixaa Aanaalee fi Magaalotaa gara garaa keessatti Labsiin Xumura Gabrummaa Qeerroon labsame bifa qindoomina qabuun itti fufee jirachuu maddeen OMN’tti himan.
Magaalota akka Gincii, Ambo, Gudar,Gooroo soolee, Tokkee, Baabbicha, Geedoo, Ijaajjii, Baakkoo fi kanneen hafan biroo keessatti sochiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii diinagdee akkuma karoorfameetti hojitti hiikamaa jira jedhan Qeerroowwan Shawaa Lixaa Aanaalee fi magaaloota gara garaa irraa OMN’ bilbilaan dubbise.
Daandiin guddichi Finfinnee ka’ee gara lixa Oromiyaa geessu kan magaalaa Geedootti bakka lamatti qoodamun gara Naqamtee fi Fincaa’aa geessu kallattii lamaaniinuu cufamun sochiin geejjibaa Guutumatti ugguramanii jiraachuu maddeen OMN’tti himaniiru.
Godina Arsii Aanaa Loodee Heexosaa gandoota fi magaloota hedduu keessatti labsiin xumura gabrummaa qeerroon labsamee ture haala gaariin hojirra oola jiraachuu maddeen keenya bilbilaan OMN’tti himan.
Daandiin guddicha Adaamaa irraa ka’ee Dheeraa, ittayyaa fi Hurutaa keessa qaxxaamuruun magaalota akka Jimataa loodee, Diksiisi, Roobe Arsii fi Balee Gasgar geesisu Qeerroo fi hawaasa naannichaatiin ugguramee akka jirus jiraataan gamasii dubbifne kun ibseera.
Qeerroo fi Qarreen biyyoota alaa jiranis hamiilee keenya cimsuun wal utubuudhaan qabsotti seennee jirra kan jedhu maddi bilbilaan dubbifne kun, Poolisiin Oromiyaa kanneen aantummaa saba isaanii qabanis gara qabsoo oromoottii deebi’uun guyyaa kaleessaa qeerro cinaa dhaabbachaa akka turanii fi labsii xumura gabrummaa kana milkeessuuf nu tumsaa jiru jedha.
Namoonni faallaa ummata ta’uun gabrummaan ummata keenya irra akka bubbultu tattaafacha turanii fi Konkolaatotaa labsii kana cabsuun socho’aa turan irrattis tarkaanfiin akka fudhatamee fi gara fuulduraatillee kan cimee itti fufu ta’us Qeerroon odeessa kana nuun gahan ibsaniiru.
Labsii xumura gabrummaa jechuun boqonnaa qabsoo keenyaa isa murteessaa dha kan jedhan Qeerroon, ummanni keenya humna qabu hunda fayyadamuun of qusannoo tokko malee falmatee bittaa sirna nafxanyaa ofirraa ciruuf warraaquu qaba jechuun dhaamanii jiru.